Taliyaha Ciidanka Booliska Soomaaliyeed oo tababar u soo xiray 600 askari oo ka mid ah ciidankii hore ee booliska Soomaalya
Mogadishu Khamiis 27 September 2012 SMC
Taliyaha Ciidanka Booliska Soomaaliyeed oo tababar u soo xiray 600 askari o oka mid ah ciidankii hore ee booliska Soomaaliyeed isla markaana kormeeray goobtii ay ciidank ka qaadanaayeen mushaharaadkooda Munaasabad weyn oo loogu talagalay xiritaanka tababar ciidan oo socday muddo ku dhow lix bilood ayaa maanta lagu qabtay dugsiga sare ee tababarka ciidanka Booliiska Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho ee jeneraal Kaahiye ”ex Scuola Di Polizia Somala”.
Munaasabadda xiritaanka tababarkaas waxaa goob joog ka ahaa Taliyaha ciidanka Booliska Soomaaliyeed Sareeye Gaas Shariif Sheekhuna Maye,madaxa xafiiska UNDP ee Somalia Peter Cross, taliyaha ciidanka booliska AMISOM ”AMISOM POLICE COMMISSIONER” Dr Charles Makono, taliye xigeenka Boliiska AMISOM Ben Nyoko iyo saraakiil sare oo ka socotay hoggaanada kala duwan ee uu ka kooban yahay ciidanka Booliska Soomaaliyeed.
Taliyaha Ciidanka Boliiska Soomaaliyeed S/Gaas Shariif Sheekhuna oo munaasabadda hadal ka jeediyay ayaa sheegay in ciidankan tababarka loo xiray ay yihiin ciidankii hore ee Booliska Soomaaliyeed ee dalka ka howlgali jirey burburkii dowladdi dhexe ee dalka ka hor, isla markaana haatan baahi jirta awgeed iyo iyagoon sina looga maarmeynin aqoontooda iyo qibraddooda shaqo ay lagama maarmaan tahay in dib loo howl geliyo si ay uga qayb qaataan sugidda amniga.
S/gaas Dr Shariif Sheekhuna Maye ayaa sheegay in mudnaanta koowaad uu mar walba siinaayay tan iyo intii loo magacaabay xilka taliyaha Ciidanka Booliska inuu isku keeno dibna u howlgeliyo ciidankii hore ee qibradda lahaa si loo helo ciidan boolis oo tayo fiican leh. Taliyaha ayaa sidoo kale sheegay in ay har iyo habeenba ka go’an tahay inuu dib u soo nooleeyo ciidanka Booliska Soomaaliyeed si dalka iyo dadka Soomaaliyeed ay u helaan ciidan tayo,karti iyo waayo aragnimo buuxda u leh shaqada ciidanka Booliska.
Taliyaha Ciidanka Booliska Soomaaliyeed S/Gaas Shariif Sheekhuna ayaa sheegay in dhowr jeer ay baafiyeen isla markaana ay idaacadaha iyo tiifiiyada ka sii daayeen baaq ku aaddan in dhamaan ciidamadii hore ee Booliska Soomaaliyeed intii joogta ay dib ugu soo noqdaan howlahoodii ciidan.
”Waa illaah mahaddii maanta waa aragtaan in aan ku guuleysanay inaan soo ururino dibna u howlgelino 600 askari oo ka tirsanaa qeybaha kala duwan ee ciidanka booliska Soomaaliyeed, intaasna dadaalkeenu kuma ekaanayo haddii allaha awoodda lihi uu oggolaado waan wadaynaa isu keenidda iyo dib u howlgelinta ciidankii hore ee Booliska sidoo kalena waxaan barbar wadi doonaa qorista ciidan cusub oo ku soo biira ciidanka Booliska Soomaaliyeed” ayuu yiri taliyuhu.
Taliyaha Ciidanka Booliska Soomaliyeed S/Gaas Shariif Sheekhuna ayaa kula dardaarmay ciidamadaas inay wax allaale iyo wixii aqoon iyo waaya aragnimo ah ee ay leeyihiin looga baahan yahay maanta inay ugu adeegaan dalkooda iyo dadkooda si looga baxo dhibaatada iyo amni darrada ka jirta qeybo ka mid ah dalka oo ay ugu horeyso magaalada caasimadda ah ee Muqdisho.
Munaasabaddaas kadib waxaa taliyaha Ciidanka Booliska Soomaaliyeed iyo wafdigii ka socday hayadda UNDP ee uu horkacayay Dr Peter Cross ay u dhaqaaqeen taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed ”Commando Polizia” halkaasoo ay maanta ka socotay bixinta mushaharaadka ciidanka, waxaana taliyaha iyo wafdiga UNDP ay kormeer ku sameeyeen goobtii ay ka socotay mushahar bixinta waxayna halkaas warbixin ku saabsan qaabka ay howshu u socoto uga dhegeysteen madaxda hoggaanka maaliyadda ee ciidanka boliiska Soomaaliyeed.
Intaa kadib waxaa taliyaha Ciidanka Booliska Soomaaliyeed S/gaas Shariif Sheekhuna uu kulan kula qaatay xafiiskiisa Dr Peter Cross iyo wafdigii uu hoggaaminayay ee ka socday UNDP, isagoo halkaas ku siiyay warbixin ku aaddan baahida ciidanka iyo waxyaabaha ay ka codsanayaan UNDP da inaya ka caawiso.
Taliyaha ayaa sheegay in ciidanka Booliska Soomaaliyed ay ka maqnayd lacagta mushaharkooda ah ku dhowaad muddo siddeed bilood ah intaas oo dhan ay ciidanku ku shaqaynayeen si waddaninmo iyo soomaalinmo ku jirto oo sikaa wax u qabso iyagoo aan marnaba ka daalin, ka caajisin amaba ka caga jiidin awaamiirta la siiyo oo mar walba iyagoo mooralkoodu iyo iimaankoodu uu sareeyo ay ugu adeegayeen bulshadoodu.
”Ciidanku mushahar ma qaadan muddo siddead bilood ah, mushaharka ka sokow waxaa kaloo jira xuquuqo kale oo aysan weli haysan ciidanka oo ay ka mid yihiin daryeel caafimaad oo lacag laáan ah iyaga iyo qoysaskooda,daryeel dhaqaale oo loo fidiyo qoysaska ciidamada geeriyooda iaygoo gudanaya ama kuwa hawl gabka noqadaba,isaguna ka taliye ahaan inay waajib ku tahay inuu u raadiyo xuquuqahaas ka maqan ciidanka, ayuu yiri taliyuhu”. Ciidanka Booliska Soomaaliyeed howshoodu kuma eka oo keliya sugidda amniga ee xitaa waxay gacan ka geysteen dib u dhiska iyo dayactirka goobo badan oo ay ka mid yihiin qaar ka mid ah saldhigyada ciidanka Booliska ee ku yaal gobolka Banaadir kuwaasoo burbur xoooggaan uu ka soo gaaray dagaaladii kala duwanaa ee dalka ka dhacay labaatankii sanno ee ugu dambeysay.
Taliyaha ayaa ballan qaaday in marnaba aysan habacsanaan ku imaan doonin howlahii ay ciidanka booliska soomaaliyeed u hayeen shacabkooda duruuf walba oo lagu jiro isla markaana ay har iyo habeen u soo jeedi doonaan badbaadinta sharafta, nafta,karaamada iyo hantida shacabka Soomaaliyeed iyagoo tala saaranaya allahooda weyn isla markaana ay hubaan inay ku guuleysan doonaan waajibaadkooda.
Ugu dambeyn taliyaha ayaa ugu baaqay inay garab istaagaan ciidamadooda iyo dowladdooda si loo sugo amniga dalkana dib loogu soo celiyo amarkii iyo kala dambayntii, sidoo kalena ay dhamaan qeybaha kala duwan ee ay kooban yihiin ciidamadau ay ku dadaalaan sidii ay u kasban lahaayeen kalsoonida shacabka waxaana taas lagu gaari karaa wada shaqayn wanaagsan oo dhex marta ciidanka iyo shacabka iyadoo ciidamadu ay waajib muqaddas ah ku tahay inay dhowraan ansahaxa iyo dishibiliinka ciidan marka ay howlahooda fulinayaan.
Said Axmed sidaxmed@yahoo.se Maxamuud Axmed Xasan